किन बढ्दैछ मधेशमा तनाव ? छिमेकीको मधेश मोह र बढ्दो संक्रमण
अझै ढिला भए आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ
Friday, 25 Sep, 2015 8:08 PM
संविधासभाबाट संविधान जारी गर्नु अगाडि देखिनै सुरु भएको मधेश आन्दोलन अहिले पनि जारि छ । संविधान आएसंगै देश विकास निर्माण तर्फ उन्मुख हुनेमा आम जनताको आशा छ । तर देशको एक भागमा भइरहेको आन्दोलनलाई छाडेर देश अन्य मुद्धामा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छैन । संविधान जारि भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्झौता छ दलहरु विचमा, तर प्रधानमन्त्री सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने कार्यक्रम रहेकाले यसलाई केहि पछि धकेल्ने प्रयास भएको थियो । आन्तरिक परिस्थिति विसम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणलाई रद्द गर्दै, सभामा भाग नलिइ उप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई अमेरिका पठाएका छन । यता आन्दोलनरत दल अहिले पनि वार्ताका लागि तयार भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले उनीहरुको ढोकामै पुगेर गरेको आह्वानलाई समेत मधेश केन्द्रीत दलले वास्ता गरेको देखिदैन ।
प्रधानमन्त्री र शिर्ष दलको पछिल्लो आह्वान पछि बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मोर्चाले सिमावर्ती क्षेत्रमा आन्दोलनलाई केन्द्रीत गर्दै नाकावन्दीको रणनीति लिएको छ । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि मोर्चाको आन्दोलनमा भारतको सदिक्षा रहेकै छ । यसको अर्थ यो होइन की मधेशमा समस्या छैन । वारी बस्ने र पारीको आर्शिवाद थाप्ने प्रचलन अहिले मात्रै होइन र मधेशी नेताहरुले मात्र होइन केन्द्रमा रजाई गर्नेहरुले पनि वर्षाैंदेखि गरिरहेका छन् । सरकार गठनमा भारतको समर्थन जुटाउने प्रयास सधै गर्ने नै गरिन्छ । जे भए पनि तराईमा भएको आन्दोलन मिलाउने जिम्मा नेपाल सरकारकै हो, नेपालकै दलको हो । आन्दोलनकारी राखेका मागलाई सक्ने जति पुरागर्ने पनि नेपालले नै हो त्यो आन्दोलनकारीले पनि बुझन जरुरी छ । संविधान जारि गर्नु भन्दा अगाडि सहमति गर्दा भन्दा अहिले समस्या अझै जटिल भएको छ । आन्दोलनकारी आन्दोलन रोकेर टेक्ने स्थान संविधानसभा अहिले छैन, संविधान जारि गर्नु पहले भएको भए त्यो स्थान सुरक्षित थियो । अव अवतरण गराउदा टेक्ने ठाँउ समेत तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारीका माग थप जटिल बन्दै छन उनीहरुले सहमतिका लागि आफ्ना थप एजेण्डा राख्ने तर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ । मधेश समस्या जति ढिला गरयो, त्यति जटिल बन्दै छ ।
मधेश आन्दोलनमा देखिएको छिमेकी मोह
संविधान जारी भएपछि खुलेर स्वागत नगरेको भारतले मधेशको समस्या सुल्झाउन पटक पटक दवाव दिदै आएको छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम समय सम्म भारतले आफ्नो दवावलाई जारी राखेको थियो तर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्न भने सफल भएन । यसमा भारतका दुई थरी महत्व देखिन्छ । एक त भारतले मधेश क्षेत्र अशान्त हुँदा आफ्नो सिमावर्ती क्षेत्रमा पनि समस्या हुने भएकोले त्यसलाई ध्यान दिइरहेको हुन सक्छ । यो सारै थोरै मात्रै सत्यको नजिक देखिन्छ ।
अर्को महत्वपुर्ण कुरा यो संविधानमा भारतले आफ्नो स्वामित्व खोजेको छ । शान्तिप्रक्रियाका केहि महत्वपुर्ण पाटोमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गरेको भारतले संविधान निर्माणको पुर्णतामा पनि आफ्नो भुमिका देखाउन खोजेको हुन सक्छ । जे भए पनि संविधान जारि गर्ने अन्तिम चरणमा भारतिय पक्षले सोचे भन्दा परिस्थिति बेग्लै बन्यो । अझै सत्यको नजिक गएर भन्ने हो भने भारतीय पक्षको चाहनालाई नेपाली नेताहरुले अस्वीकार गरिदिए । अहिले भारत त्यो कुराको नजानिदो पाराले बदला लिन चाहिरहेको छ, त्यसमा उसले देखेको मधेशी शक्ति नै हो । मधेशलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई झुकाउने दाउमा अहिले भारत देखिएको छ ।
भारत विरुद्धका अभिव्यत्तिको असर
भारतीय पक्षबाट नेपालमा हस्तक्षेप बढाएको भन्दै नेपालको ब्यापक विरोध सुरु भयो । भारतले नाकावन्दी लगाएको भन्दै अनेक खालका अभिव्यक्ति आउन थाले पछि भारतीय पक्षबाट यसलाई खण्डन गरियो । तर धेरै वर्ष पछि उच्च स्तरिय भ्रमण गरेका भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मादीले भारत प्रति नेपालीको दृष्टि परिवर्तन गराउन सफल भएका थिए । मोदीले जसरी भारत र नेपालको सम्बन्धलाई नजिक बनाएका थिए त्यो पछिल्लो समय देखाएको गतिविधिले पुरै नकारात्मक भएको छ । नेपाल आउँदा वाह वाह कमाएका मोदि प्रतिको अहिले सकारात्मक सोच राख्नेको संख्या घट्दै गएको छ । भारतले यो विषयलाई नियालीरहेको त छ, तर अझै पनि संविधान निर्माणलाई पुर्णता दिने विषयमा आफ्नो भुमिकालाई घटाइएको चित्त बुझाइ रहको देखिदैन ।
कसरी हुन्छ त समस्याको समाधान ?
मधेश आन्दोलन नेपालको समस्या हो । सरकार राजनीतिक नेतृत्व कसैको हस्तक्षेप देखाएर समस्याबाट पन्छिन पाउदैन । जसले जस्ता अभिव्यत्ति दिए पनि वा हस्तक्षेप गर्न खोजे पनि आफ्नो समस्या समाधानमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भिरता देखाउनु पर्छ र त्यो प्रयास सुरु पनि भएको छ । यसमा दुवै तर्फका अग्रसरता जरुरी छ । सरकारी तर्फबाट गरिएको आवहानलाई अस्वीकार गरेका दलले प्रधानमन्त्री देखि शिर्ष नेताले ढोकामा नै पुगेर गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । समास्याको समाधान वार्ता बाहेक अन्य विकल्प छैन । सरकारि तवरबाट धेरै मुद्धा सम्बोधन भइसकेको र केहि समस्या भए समाधान गर्न तयार भएका अभिव्यक्ति त आएका छन तर त्यसलाई मधेशका जनता सम्म पुराउने संयन्त्र तयार भएको छैन त्यो तयार गरिनु पर्छ । अर्को समस्या सधै सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइनु पनि हो । राज्यले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्दा आफ्नो सामाथ्र्यलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । आज गरौ भोलि जे होला होला भन्ने प्रवृतिको उपज हो अहिले मधेशमा देखिएको समस्या त्यसैले तत्काललाई साम्य पार्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मधेशको समस्या तत्काल समाधान गरिएन भने त्यहाँको नेतृत्व भन्दा पनि आन्दोलन बाहिर जान सक्छ त्यो समयमा थप जटिलता आउन सक्छन । यता तर्फ आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि सोच्न जरुरी छ । वार्ता मार्फत मध्यमार्गी बाटो निकाल्नु नै अहिलेको समाधान हो । समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ त्यस तर्फ सवै पक्षले गम्भिरता पुर्वक समिक्षा गर्न जरुरी छ ।